Saxeexa qoraalka | Hal-abuurka Online
Waxaa sii kordheysa caadi in si dhijitaal ah loo saxiixo dukumeentiyada. Ha ahaato foom, qandaraas, iimayl, sawir ama sawir… saxeexyada gacanta ayaa lumaya oo qaar badan ayaa seegaya khadadkaas. Laakiin, Maxaa dhacaya haddii aad sharad ku gasho farta saxiixa?
Sug, miyaadan garanayn waxay tahay? Waa xarfo taxane ah oo u muuqda inay gacan ku qoran yihiin ama istarooggoodu kaa dhigayo inaad ka fikirto far qoris. Waxay ku habboon yihiin saxeexa iimayllada, dukumentiyada, sawirrada, naqshadaha, iyo, guud ahaan, wax kasta oo sita saxiixaaga. Ma rabtaa inaad ogaato waxay yihiin?
1 Waa maxay sababta loo isticmaalo xarfaha saxeexa
2 Farta saxeexa
2.1 Farta saxiixa shakhsi ahaaneed
2.1.1 qoraalka Janesville
2.2 Xarfaha iimaylada
2.2.1 Magnolia Sky ee StereoType
2.3 Xarfaha sawirada
2.3.2 Gacan Liberal
Waa maxay sababta loo isticmaalo xarfaha saxeexa
Sida Saxeexu waa qayb ka mid ah shakhsiyadaada, wax badan ayuu kaa sheegaa iyadoo ku xiran hadba sida aad u sameyso si uun ama si kale, doorashada nooca farta saxiixa ayaa sidaas si la mid ah sameyneysa.. Dhab ahaantii, waa wax caadi ah in la doorto mid la socda shakhsiyaddaada, xitaa adigoon ogaanin.
Markaad taas samayso, waxaad gaadhaysaa in waxa ay shirkadu doonayso inay sidoo kale ku siiso shakhsiyad. Tusaale ahaan, qiyaas in aad heshay laba emails. Mid ka mid ah ayaa sita saxeexa caadiga ah. Midda kalese waxa uu leeyahay saxeex naga dhigaya in gacanta lagu saxeexay. Midkee ayaad ku raaxaysan lahayd? Waxaa suurtogal ah in labaduba ay wanaagsan yihiin oo aanad dan ka lahayn. Laakin, haddii aan kaala hadalno in aan saameyn ku yeelano ama yeelano dareemo kala duwan, hubaal in qoraalka saxiixu uu si badan kuu buuxiyay.
Oo waa sidaas, farta gacanta lagu qoro ama far la mid ah xarfaha qoran waxay noo soo dhawaynayaan dhex-dhexaadiyaha, waxay naga dhigayaan in aanay ahayn shaashad kombuyuutar ee ay tahay qof. Si kale haddii loo dhigo, waxay bani-aadminaysaa farriinta. Waxaadna ku samayn kartaa sawirro, naqshado, iwm. Tani waa sababta ay aad muhiim ugu yihiin.
Farta saxeexa dhexdeeda, waxaan u kala saari karnaa ilaha kooxo waaweyn. Shayguna waa in farta emaylka ama saxeexa shakhsi ahaaneed aysan la mid ahayn sawirka. Inkastoo la isticmaali karo, sidaas laguma talinayo.
Sidaa darteed, waanu kuu qaybinaynaa oo adiga ayaa noqon doona qofka go'aaminaya waxa loo isticmaalo.
Farta saxiixa shakhsi ahaaneed
Waxay yihiin kuwa aad isticmaali lahayd, tusaale ahaan, si uu u saxiixo heshiisyo, waraaqo, foomamka, iwm. Caadi ahaan kiisaskan waa caadi inaad isticmaasho saxeexaaga. Yacni, aad daabacdo dukumeentiga, saxeex oo iskaan-qaad. Ama weli ka sii wanagsan, inaad saxiixdo barnaamij ka dibna kaliya waa inaad u turjunto dukumentiyada la saxeexayo (ka boodista tallaabada daabacaadda, saxeexida iyo iskaanka).
Laakiin, haddii aadan rabin inaad taas samayso sababtoo ah waxaad door bidaysaa inaad ilaaliso saxeexaaga oo aadan "ku dhufan" internetka, fursadaha aad isticmaali karto waa kuwan soo socda.
Tani waa mid ka mid ah xarfaha saxeexa ee u oggolaanaya isticmaalka shakhsi ahaaneed oo keliya, laakiin waxaad haysataa suurtogal ah inaad la xiriirto haddii aad rabto isticmaalka ganacsi.
In kasta oo gacan lagu qoray, aad ayaa loo fahmay.
Tani waa mid kale oo ka mid ah xarfaha xarfaha ee saxiixa oo aad u qurux badan, iyo Runtii waxay u muuqataa inaad tahay qofka saxeexaya. Dhab ahaantii, waxaad xitaa u isticmaali kartaa sawirro ama iimaylo sababtoo ah si fiican ayaa loo fahmay.
Waad ka soo saari kartaa Halkan.
Ma rabtaa in fartu noqoto mid xiiso leh? Hagaag kan, laakiin Keliya erayo gaagaaban maadaama, haddii aad si dhow u eegto, waxay aad u ballaaran tahay xarfaha kasta.
Waxaa lagu sameeyay istaroog aad u fiican oo nadiif ah waxayna ku habboon tahay saxiix gaaban ama xitaa in lagu saxiixo sawirrada.
Haddii aad rabto inaad saxeexahaaga ku shakhsiyayso iimayladaada oo aad ka dhigto kuwo ka duwan kuwa caadiga ah, maxaad u aadi weyday fardo kale? Haa runtii, qofna ma dhigi kartid (waxyaabaha caadiga ahna waa inaad ku sameyso muuqaal ahaan).
Dabcan, ka hor inta aanad bedelin, waa inaad taqaanaa sida loo sameeyo. Si aad tan u samayso, oo aad tusaale ahaan u soo qaadato Gmail-ka oo ah kuwa aynu sida badan u isticmaalno, waa in aad tagtaa "Settings". Guud ahaan, waxay ku geyneysaa tab ku habboon, kaliya waa inaad hoos ugu dhaadhacdaa qaybta "Saxiixa". Haddii aadan midna haysan, waxay kuu sheegi doontaa inaad abuurto mid waxayna ku siin doontaa far kala duwan. Maxaa dhacaya haddii aadan jeclayn midna? Markaa waa inaad ku beddeshaa muuqaal ahaan. Taasi waa, ku samee sawir leh farta iyo saxiixa aad rabto kuna dheji Gmail. Tani waxay si toos ah u gelin doontaa dhammaan iimayllada aad samayso. Dabcan, xusuusnow in asalka sawirku uu yahay mid hufan si ay u muuqato mid ka sii fiican.
Maxaase xarfaha saxeexa la isticmaali karaa? Waxaan kuu soo jeedinaynaa.
Magnolia Sky ee StereoType
Far-qoraalkan saxiixyadu waa mid ka mid ah kuwa loogu jecel yahay sababtoo ah, dhinac, Way fududahay in si guud loo fahmo, laakiin dhinaca kale waxay weli haysataa muuqaalkaas xiisaha leh iyo kuwa gacanta lagu sameeyay. Ku habboon iimaylladaas aad dirto oo aad rabto inaad abuurto saaxiibtinimo, dabacsanaan iyo adiga-ku dareemo.
Waxa loo kala saaraa sida a farta calligraphic iyo qurxinta, oo leh taabasho jacayl iyo xarrago isku mar ah. Ku fiican iimaylladaas aadka u daran laakiin leh barta isku xirka cidda aad u dirto.
Tani waxaan Waxaan ka helaa gaar ahaan dhamaadka ereyada dartiis, kaas oo had iyo jeer noo ogolaan kara in aan ku ciyaarno waxoogaa naqshadeynta saxiixa emailka.
Waa run in sawirada, naqshadaha, iwm. waxaad isticmaali kartaa saxiixaaga gaarka ah. Dhibaatadu waxay tahay, Mararka qaarkood saxeexaasi maaha mid la akhriyi karo waxaana laga yaabaa inaad ogaato inaadan ku jirin ama run ahaantii ma garanayaan qofka aad tahay sababtoo ah saxeexaagu ma caddaynayo magacaaga iyaga.
Sidaa darteed, way fiicantahay in la isticmaalo nooc kale.
Haddii aad rabto xarfaha loogu talagalay saxiixa far waaweynTani waxay noqon kartaa ikhtiyaar. Waxay leedahay naqshad casri ah laakiin sidoo kale naqshad caadi ah, oo ku siinaya afar doorasho oo kala duwan.
Waa hab lagu muujiyo qoraanimadaada sawirada Waad haysaa Halkan.
Dhammaan xarfaha waaweyn, oo leh suurtogalnimada geesinimo iyo in ay siinayso dareen ah in gacanta lagu rinjiyeeyay, si aad ugu fiican rinjiyeynta, sawirada, iyo naqshadaha internetka.
Xaaladdan oo kale horeba leh xarfaha waaweyn iyo kuwa yaryar, iyo si shakhsi ahaan iyo ganacsi ahaanba loo isticmaalo, Wajigani waa mid madadaalo leh oo nadiif ah oo loogu talagalay sawirada, sawirada, iyo isticmaalka kale.
Sida aad arki karto, waxaa jira far badan oo saxiix ah oo aad isticmaali karto, bilaash iyo lacag. Ma ku talisaa mid aad taqaan ama si joogto ah u isticmaasho?
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Fuentes » Qoraalka saxeexa